Ywar Thar Lay (YTU): နောက်တစ်ကွက်အရွှေ့
ရနျကုနျကနေ ကနြော့ရဲ့ နှဈနှဈဆယျကွာသညျအထိ မပွောငျးဖွဈသေးတဲ့ အိမျမှာနှဈညနားအပွီးနောကျတဈနမှေ့ာတော့ တဈခေါကျရှဖွေ့ဈပွနျတယျ။
ဒါက ရနေံခြောငျးက အသိအိမျက နှငျးဆီတှပေါ
ရနေံခြောငျးနဲ့ ကြောကျပနျးတောငျးလမျး အပိုငျးတှေ တျောတျောလေးပကျြစီးနပေါပွီ။ မမွဲတဲ့လောကကွီးကို အမွဲထောကျခံနတေဲ့လမျးတှပေေါ့။ အခုတော့ လုပျပိုငျခှငျ့တှခေပြေးပွီးလုပျနတောတှရေ့တယျ။ ဆောငျပုဒျလေးက ခဈြစရာလေးပါ တဈပေါကျတှရေ့ငျတဈပေါကျဖာတဲ့...
သူတို့ရဲ့ကတ်တရာကြိုလုပျငနျးကို ကားပျေါကလြှပျတဈပွကျ ရိုကျမိခဲ့တယျ
လကျပနျပြားမှာထမငျးစားရငျး နာမညျကြျော ကွကျသားကွျောဗနျးကိုရိုကျဖွဈအောငျရိုကျခဲ့ပါတယျ (မမုနျ့လုံးကသခြောမှာထားလို့ပါ)
အရငျငါးနှဈကြျောကသှားခဲ့ဖူးသလို မဟုတျတော့ပဲ လမျးတှပေကျြစီးနခေဲ့ပွီ။ ခရီးက ကွနျ့ကွာတာမို့ ပငျးတယကိုရောကျတော့ မိုးအတျောခြုပျသှားခဲ့ပါပွီ။ မနကျမိုးလငျး ပငျးတယမွို့ရဲ့ အာရုဏျတကျပါ.
ပငျးတယမွို့စြေးလေးနဲ့ လောငျစာဆီမလိုသေးတဲ့ ကုနျစညျပို့ဆောငျရေးပါ
သဈပငျကွီးတှကေ မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျ အုံ့အုံ့မှိုငျးမှိုငျးနဲ့ လှမျးခငျြတိုငျးလှမျးစရာ
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 11:12 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၅ က Field ဆင်းခဲ့ဖူးတဲ့ ပင်းဒယကို ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတော့ အတော် လွမ်းမိသွားပြီ... ရွှေဥမင်ရယ်၊ အနောက်ဂူရယ်၊ ပုန်းတလုပ်ကန်နဲ့ ပင်းဒယ အ.ထ.က ကျောင်းကို အလွမ်းဆုံးပဲ...
ပို့စ်တခုမှာ သုံးချင်လို့ ပင်းဒယရဲ့ ဓါတ်ပုံ ၃-၄ ပုံလောက် ကူးယူခွင့်ပြုပါ...
အကယ်၍ တခြား ပင်းဒယရဲ့ ပုံတွေ ရှိသေးရင်လည်း အကို့ မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်...
နေရာလေးတွေ တော်တော် လှတယ် ဒါနဲ့ ပင်းတယ ဆိုတာ ဘယ်နားမှာလဲ မော်လမြိုင်နားမှာလည်းရှိသလားလို့ ပင်းတယဂူ ရောက်ဖူသလိုလိုပဲ အသက်ကြီးတော့မေ့ပြီး ။
တို့လည်း အားကျမခံပြောလိုက်အုံးမယ်..လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်က..ပင်းတယ ရေချမ်းစင် တ၀ိုက် ခြေရာတွေ ထပ်ခဲ့တယ်။ ရေချမ်းစင်ကနေ ပင်းတယထိ လမ်းလျှောက်.. ရွှေဥမင်ကို တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်ရင်..စောင်းတန်းက.. လက်ဖက်..အာလူးကျော် ပဲပုပ် ကျော် ဆိုင်ပေါက်စေ့ မြည်းရင်း..နေ့လည်စာ ဖြစ်ခဲ့။ လွမ်းသွားပြီ။ ထင်ပါတယ်..ပင်းတယ ကတော့..အရင်အတိုင်းပါပဲ။
ရွှေဥမင်ဂူ ရှေ့က လဘ္ဘက်ဆိုင်မှာ
အလကားမည်းလို့ရတဲ့ လဘ္ဘက်နဲ့ပဲပုတ်တွေကို အတင်းအားဓမစားပြီး
အပြန်ကြတော့ တောင်ကြီးလဲရောက်ရောကားမူးပြီးအန်ပါလေရော ။
လှလိုက်တာ။ တင်ပြ့ပုံ ကောင်းလွန်းလို့ ကြက်သီး ထမိအောင် ကြည်နူးမိတယ်။ တကယ်ကို မြန်မာ ပါဘဲကွယ်။ ဂုဏ်လဲယူမိတယ်။ သိတ်လှတဲ့ အမိမြေပါ။
ုkom: တကယ်ပါ။ ဘုရားစူး
ပင်းတယမရောက်တာတောင် ကြာပေါ့...။ ရွှေဥမင်အတက်က လက်ဖက်နဲ့ ပဲပုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေတောင် သတိရသွားတယ်...။ ချယ်ရီပန်းကိုတော့ အမြတ်တနိုးလေးခူးသွားတယ်..။
ပင်းဒယ ပုံလေးတွေ ရှိရင် ထပ်ထည်ကပါသီါ်
ပုံတွေကြည့်ပီး ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာပီ ၊၊
So you visited Yenangyaung. It is my native town. I lived near MyoMa Zay, Kyan Kaing Pagoda. Did you visit SaNayNan Pagoda and KyaukSarYone Pagoda? I miss my town. :)
လှပတဲ့ အကွက်လေးပဲ နောက်တကွက်က တောင်ကြီးများလားလို့မှန်းလိုက်မိတယ်
စကားမစပ် နှင်းဆီကို တော်၂ကြိုက်တာပဲနော့ ဒါ့ပုံလေးတွေ သိပ်ကောင်းတယ် စိတ်ကူးလေးလည်း သိပ်ကောင်းတယ် ချယ်ရီတွေမြင်တော့ တောင်ပေါ်မြို့ လေး ၂ မြို့ ကို ပြန်သတိယမိတယ် (ပင်းတယတောင်ခြေဆိုင်တွေက အမြည်းကျွေးတဲ့ လက်ဖက်နဲ့ ပဲပုတ်ကို စားခဲ့တယ်မလား လက်ဖက်တောင် နည်း၂ထပ်တောင်းမယ့်ပုံပဲ)
လက်ပန်ပျားက ကြက်ကြော်စားချင်တယ် အရမ်းပဲ
အမှတ်တရ ဘဝခရီး (183)